I-Daniels 5 Star Short Let Apartment e-Lekki
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Keji
Idizayini elinganiselayo kahle eyakhelwe wena engqondweni. Le ndlu yedolobha enemibhede emine iyisengezo esisha kuphothifoliyo yethu ye-Shortlethomes edala amathuba engeziwe okuba izivakashi zethu zibe nekhaya elihle kude nasekhaya. Leli khaya eliwubukhazikhazi liyindawo yokugcina ephezulu, enezitezi ezi-3 eziqinisekisa ukuthi ilungu ngalinye lomndeni linendawo eliyidingayo. Nokho ukubaluleka kokuchitha isikhathi ndawonye njengomkhaya akuzange kushaywe indiva; Uhlelo oluvulekile lokuhlala kanye nezindawo zokudlela ziyindawo ekahle yenhlalo yekhaya.
24-7 ugesi nokuvikeleka
Amakamelo ama-3 e-en-suite aphelele aneshawa egumbini ngalinye
I-smart TV engu-65 inch ene-Netflix ekamelweni elikhulu kunawo wonke kanye ne-smart tv engu-45inch kuwo wonke amanye amagumbi
I-65inch smart tv egumbini lokuhlala lokudlela
Igumbi lemidlalo elakhelwe abangani noma izingane nje
Igumbi lokuhlala elikhulu lokudlela
Ikhishi elibanzi kakhulu elinefriji enkulu yesiqandisi
Ukuqedela kwesimanje okufanele ukubhekwe ngaso sonke isikhathi lapho uzipholele ukuze uphumule
Ikhaya eliphelele kude nekhaya.
Umphathi wesikhungo ozinikezele kanye nomnakekeli.
Le ndawo itholakala eduze kwe-Admiralty way eLekki Phase 1.
I-Frisco Court ijabulela ukuthinta okunethezeka kokuqeda, ukuphepha okungu-24-7, ugesi we-24-7, ukunakekelwa kwasekhaya okuzinikele kanye nomphathi wesikhungo ukuze abhekane nezidingo zakho. Igumbi lokulala eliphakeme aligcini nje ngokuba ne-en-suite emangalisayo kodwa futhi negumbi lokugqoka le-chic. Izici ezengeziwe, njengegumbi lezinsiza, zinakekela zonke izidingo ezingokoqobo zokuphila kwansuku zonke kuyilapho zingaphazamisi ukwakheka kwesitayela kwezindawo zokuhlala.
Igcina zonke izingxenye ezingcono kakhulu zokuhlala phesheya eNigeria kanye nokuqedwa kwesimo sobuciko sesimanje, iShortlethomes Frisco Court iyikhaya lomuntu noma umndeni wanamuhla webhizinisi omatasatasa.
I-Terrace ibekwe ezitezi ezintathu. Esitezi esiphansi kunegumbi lomdlalo wokuzijabulisa kanye nebha eline-TV engamayintshi angu-32 nendlu yangasese yezihambeli.
Isitezi sokuqala sinegumbi lokuphumula elikhulu eline-65” TV ene-Netflix ne-DSTV ehlanganiswe nesistimu yokuzijabulisa yasekhaya ye-BOSE, indawo yokudlela, ikhishi elisebenza ngokugcwele elinovulandi nenye indlu yangasese yezivakashi.
Indawo yokufikela esitezi sesibili inesihlalo sokuphumula esiphumulele nesipika seBluetooth. Lesi sitezi siholela kumagumbi okulala ama-3, wonke ama-en-suite aneshawa yawo, ukufudumeza kwamanzi, kanye nezisekelo zokushefa eziphindwe kabili. Igumbi lokulala elikhulu linombhede oyi-cushy super king, uhamba ekhabetheni eline-TV engama-intshi angu-55, igumbi lesibili linombhede olingana nenkosi one-TV kanti igumbi lesi-3 linombhede wabantu ababili kanye ne-TV.
Indawo yasekhishini inikeza i-pantry kanye nendawo eyanele yokugcina. Izinto zikagesi zifaka umshini wokuwasha, isiqandisi/isiqandisi saseMelika, i-microwave/oven edidiyelwe, kanye ne-hob yokungenisa izishisi ezi-5.
Zonke izikhala (kuhlanganise nekhishi) zine-air-conditioning ngokuphelele. I-Free-WiFi iyatholakala njengomabonakude wekhebula onenqwaba yamashaneli ongakhetha kuwo. Wonke ama-TV asendlini axhumeke nge-wi-fi futhi i-Netflix isilungile
Indawo engaphandle ine-swimming pool. Ugesi uqinisekisiwe amahora angu-24 ngosuku.
Imigwaqo mihle kakhulu futhi ungaxhuma kalula noma kuphi eLagos Island kungakapheli imizuzu
4.67(33 okushiwo abanye)